Ungawakhetha kanjani amagilavu ​​we-TIG Welding
Iningi labantu alihlanganisi igama elithi welder nomculi, kepha esimweni sokushisela kwe-TIG, ama-welders amaningi anekhono akutshela ukuthi lokhu ikakhulukazi kuyindlela yobuciko. Ukushisela kwe-TIG kungenye yezindlela zenqubo ye-welding enzima kakhulu ukuzazi kahle, futhi ikhwalithi yayo ye-weld yinhle futhi izinzile, edinga i-h ...
Ukukhethwa okulungile nokunengqondo nokusetshenziswa kwezindawo ezi-5 zamagilavu ​​anamazinga okushisa aphezulu
Amagilavu ​​avikela ukushisa okuphezulu Njengoba igama liphakamisa, amagilavu ​​avikelayo okuphepha okushisa aphezulu asetshenziswa ezindaweni ezishisa kakhulu. Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu elixubekile lamakhemikhali fibre iminwe emihlanu amagilavu ​​wesundu nenkomba yomklamo wokugqokwa kwesikhumba ...
Isandla siyingxenye ebaluleke kakhulu yomzimba wethu, futhi umsebenzi nempilo akunakwehlukaniswa nakho. Kusukela ngesikhathi esizalwa ngaso, kuze kube sekupheleni kwempilo, izandla bezilokhu zihamba njalo. Kuyadabukisa ukuthi kaningi sikushaya indiva ukubaluleka kwayo nokuvikelwa kwezandla zethu, ukuze ku-m ...
Amagilavu ​​avikela amakhemikhali Kuyingxenye ebaluleke kakhulu ekukhiqizeni amakhemikhali futhi angavikela impilo yabasebenzi. Abantu abaningi bayawazi amagilavu ​​avikela amakhemikhali, kepha abazi ngokwanele ngawo. Nazi izinhlobo eziyisishiyagalombili zezinto zokuvikela amagilavu, kanye ne-brie ...